Jalisco chaiwo chipfeko, hunhu hwekuzivikanwa kweMexico | Kufamba Nhau
Chaiye Jalisco koshitomu
Luis Martinez | 12/05/2021 09:19 | tsika nemagariro, Mekisiko
Iwo chaiwo mapfekero aJalisco ane zvakawanda zvakafanana nezvakajairwa zvipfeko zve ivo mariachis, kusvika padanho rekuti ivo kazhinji vanovhiringidzika. Muchokwadi, zvinofungidzirwa kuti vekupedzisira vakaberekerwa mutaundi reJalisco re Cocula. Nekudaro, ivo havana kunyatso kufanana. Yechipiri yadzo inosanganisa mabhatani pamabhurugwa nejaketi, pamusoro pekuve nemhando dzakasiyana siyana.
Nekudaro, iyo chaiyo yakajairwa Jalisco koshitomu, iyo ino chinyorwa chichagara, yakanyanya kudhakwa. Seizvo zita rayo rinoratidzira, isu tiri kuzokuudza iwe pamusoro penguvo dzekare dzenyika ino yeMexico, iri kumadokero kwenyika uye miganhu neya Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán y Colima, pamwe nePacific Ocean.
1 Kusarudzika kweiyo chaiyo yekupfeka kwaJalisco
1.1 Nhoroondo yesutu
1.2 Jalisco chaiwo chipfeko chevakadzi
1.3 Jalisco koshitomu yevarume
2 Jasi reJalisco rinoshandiswa rini
2.1 Charro Zuva
Kusarudzika kweiyo chaiyo yekupfeka kwaJalisco
Tichatanga nekuita zvishoma nhoroondo zvine chekuita nezvehembe iyi tobva tarisa pazvipfeko zvevarume nevakadzi. Ivo vaviri vakasiyana zvakanyanya, zvakawanda yakawanda yakajeka uye inofara izvo zvevakadzi.
Kwakatangira charro sutu, iyo, sezvaungave watoona kare, ndiyo yechinyakare kubva kuJalisco, yakatanga muzana ramakore rechiXNUMX. Sezvineiwo, zvipfeko zvinoratidza Mexico kunze kwenyika zvakazvarwa, sekufunga kwazvo, munyika dzeSpanish, kunyanya mu Salamanca.
Sezvo iwe uchizivawo, vagari vemudunhu rino vanoshevedzwa, chaizvo, charros. Uye, kana iwe ukatarisa pazvipfeko zvavo, ichokwadi kuti ivo vakafanana nejasi reJalisco. Spaniard ine bhurugwa dema rakasimba, bhachi pfupi reruvara rumwe chete, uye bhutsu dzakakwira dzakakwira. Zvakare, ngowani yakafanana, kunyange iine mapapiro madiki.
Charros neyakajairwa chipfeko chaJalisco
Iyi mbatya ingadai yakapfuura kuenda kuAmerica nekuuya kweHispanics uye yaizogamuchirwa mu Jalisco nzvimbo. Zvisinei, akagamuchira okunatsiridza dzakawanda. Mumazana emakore akatevera, yakagadziridzwa nekuwedzera micheka yakawanda yakagadzirwa nemaoko uye zvishongo. Yatove muXIX, ndiyo yaishandiswa ne chinacos, zita rakapihwa varume vaishanda muminda.
Sechido, isu tichakuudza kuti mambo Maximilian weHabsburg Aiyemura zvikuru sutu yema charro. Akatoishandisa kakawanda achiedza kujairana nerudzi rwake rutsva. Nechekare nechimurenga cheMexico, chipfeko ichi chakazozivikanwa kuva quintessential mexican koshitomu, ichidarika iyo yakajairika yemamwe matunhu enyika (kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvekupedzisira, tinokukurudzira ichi chinyorwa).
Nekudaro, parizvino hazvisi zvese zvakajairwa zvipfeko zvechiroro zvakafanana. Ivo vanosiyana nguvo dzebasa, nguvo yakazara uye yakazara rokwe, kunyange pasina kana musiyano pakati pavo. Iyo yega inogara mukati umbozha hwezvakarukwa uye zvishongo izvo zvavakaisa. Sezvaungave wafungidzira, izvo zvekare zvakapenga kupfuura zvekupedzisira, kunyange hazvo zvese zvakanaka uye zvichirova.
Kana iwe ukashanyira Guadalajara, guta guru uye rakakurumbira guta mudunhu reJalisco, hazvizo netsa iwe kuti uwane yako yakajairika koshitomu. Zvine musoro, vagari vayo havashandise zuva nezuva, asi vanodaro Ivo vanotora mukana wechero chiitiko kuupfekedza. Asi, pasina kumwe kunonoka, tiri kuenda kuzotaura newe nezve zvakajairwa Jalisco chipfeko chevakadzi.
Jalisco chaiwo chipfeko chevakadzi
Jalisco chaiye mukadzi anopfeka
Vakadzi veJalisco vanopfeka hembe-imwechete nesiketi refu. Yakagadzirwa ne poplin, mutsipa wayo wakakwirira uye maoko aro ari erudzi rwegaga. Zvakare, muchikamu chayo chepamusoro, pakukwirira kwepfuva, inotakura mamwe mabhora akafanana nevee zvinopindirana. Zvakare siketi yacho yakafara.
Nezvevara, zvinowanzoitika toni imwechete, kunyange izvi zvichisiyana neanofara matepi emuvara kuti ine inopindirana uye zvakare netambo iyo yainopfeka sezvishongo. Kana dziri shangu, iyo inogadzirwa nematare uye ine akasiyana accessories. Chekupedzisira, ngowani yemusoro webvudzi inogadzirwa nemaribhoni akafanana neaya anoonekwa padhirezi.
Jalisco koshitomu yevarume
Nezve sutu charro yevarume, inosanganisira, muchikamu chayo chepamusoro, chehembe mune iyo a kapfupi bhachi. Inosvika pazasi pechiuno uye maoko ayo akapfupika zvakaenzana kuratidza iyo zvishongo zvesirivha yemadhora. Saizvozvo, inogona kuve yakashongedzwa nayo mabhatani makumi manomwe yetoni imwe chete, kunyangwe ivo vachigona zvakare kuve yendarama.
Kana ari mabhurugwa, iwo akasimba, suede kana machira uye toni toni. Ivo vanotakurawo cheka pamwe nemakumbo ese. Izvo zvipfeko zvinowedzeredzwa nemabhutsu e-lace-up ane iwo iwo ruvara sutu.
Kunyanya kutaurwa kunofanira kuitwa nezve hat. Iyo pakutanga yaive yakagadzirirwa kurwisa mhedzisiro yezuva reJalisco uye zvakare sedziviriro kubva pakuwa kubva kubhiza. Neichi chikonzero, ivo vakagadzirwa nemvere dzetsuro, mvere dzakanzwiwa kana mashanga egorosi uye vaive nematombo mana kana ribhoni mugirazi ravo iro rakapetwa ruviri uye rikaita kuti rirambe.
Mhedziso yeiyi chaiyo ngowani yakakura uye yakafara, zvakare kutumidzwa pamusana wayo. Chekupedzisira, dzimwe nguva inoshongedzwa nayo shawl kana zvishongo zvakavezwa. Saka zvaibatsira dhizaini iyi yebasa remumunda zvekuti yakave yakajairika muMexico yese.
Chekupedzisira, chimwe chidimbu chisingakwanise kushayikwa muchita charro ndiyo serape. Mune ino kesi, hachisi chipfeko, asi rudzi gumbeze rakatakurwa nevatasvi pamwe nechigaro chebhiza ravo. Naizvozvo, hausi kuzozviona kana iwe uchienda kumatambiro kana kumafaro netsoka, asi uchauona kana zvasvika pakukwira kwevanokwira kana iyo charro inoratidza kuti tiri kuzokuratidza zvinotevera.
Jasi reJalisco rinoshandiswa rini
Chokwadi, kana tangotsanangura izvo zvipfeko zveJalisco zvevarume nevakadzi zvakaita, tichazotarisa pakutaura newe nezve zviitiko nemhemberero uko zvakajairika kuwana vanhu vakapfeka mazviri.
Iyo showa par kugona uko kwakapfekedzwa zvipfeko izvi ndezve the charrería. Zviitiko zvechivanhu zvekukwira munyika yeAztec zvinowana zita iri. Vanokura munhandare dzinodaidzwa charro canvases uye zvinoenderana nekuti vatasvi vanoita maekisesaizi akasiyana kumusana kwemabhiza avo.
Semutambo, chakazvarwa pakutanga kwezana ramakore rechiXNUMX kurangarira mabasa emombe mumunda anga ave kushaya basa. Iyo charrería yakarongeka muMexico nemubatanidzwa uye tsika dzayo dzakazivikanwa se Isingaonekwe Nhoroondo Yevanhu neUNESCO kuti ichengetedze.
Parizvino, vakadzi vanoitawo basa rakakosha charrería. Kwete chete nekuti gore rega rega mumwe anosarudzwa Reina iri rinotungamira kuvhura mhemberero dzakasiyana, asi zvakare nekuti inotora chikamu mumakwikwi eanokwikwidza. Ndiwo maAmazon anotora chikamu, pamusoro pezvose, mukuranga kunozivikanwa charra skirmish. Inosanganisira mapoka emaAmazon masere anoita choreographies kumashure kwemabhiza avo uye kune mutinhimira wemimhanzi.
Asi, nerombo rakanaka, mamwe macrasra anokurudzirwa kudzidzira dzimwe mhando dzechiratidziro. Pakati pezvakanyanya kukosha, isu tinotaura nezvako bhiza renhanga, nzombe uye vatasvi vemabhiza, iwo zvakareles ari pazasi, manganasi netsoka kana akatasva bhiza, rondedzero pfupi mumhete kana nhanho yerufu.
Zvine musoro, mune idzi kesi vakadzi vanopfeka mamwe marudzi ezvishongedzo zve sutu yavo. Pakati pavo, mabhoti ane spurs, ngowani uye mudonzvo. Uye zvakare, vanoisa pabhiza chakakosha gomo rinonzi packsaddle.
Charros anomiririra kufamba kwerufu
Iyo charrería yakabatana kwazvo netsika yeMexico zvekuti wega wega Gunyana 14 nyika yeAztec inopemberera iyo Charro Zuva. Munharaunda yayo yese (kana iwe uchida kuverenga chinyorwa nezve Veracruz, click here) equestrian uye mimhanzi inoratidza inoitirwa kurangarira. Nezve iyo yekupedzisira, iyo mariachi ivo ndivo vanopokana kwazvo.
Nezve nyika yeJalisco, iyo yatiri kutaura nezvayo, musi iwoyo Guadalajara inopemberera iyo Musangano Wepasi Pese waMariachi naCharrería. Sezvaunogona kufungidzira, migwagwa yeguta guru yakashongedzwa uye zviuru zvevarume nevakadzi vanofamba nepakati pavo vakapfeka jasi reJalisco uye vachidudzira mimhanzi yechinyakare.
Zviitiko zvinonyanya kutarisirwa mu Liberation Square, uko kune mitambo yakawanda. Asi kune zvakare mapareti, gala zvesimba mune Huro yakatemwa yemitambo uye kunyange vanhu vazhinji vakaimbwa mu Basilica yeZapopán.
Mapoka evanhu anoita mimhanzi mhando senge Tapatio manyuchi, inozivikanwa zvakare se "ngowani yekuMexico" yekusiiwa pasi nekutamba yakatenderedza. Iko kutamba kwekudanana uyo mavambo atinofanira kutarisa muMexicoan Revolution.
Saizvozvowo mukurumbira chaizvo mumhando iyi yekupemberera ndeaya Culebra, kutamba kunoitazve basa muminda, iyo Iguana and the Kuzunguza bhiza, pakati pemamwe matambiro anoitwa nevaturikiri vachiteerera iyo Mariisis inonzwika. Iri ndiro zita renziyo dzinoenda pamwe nematambiro uye kuratidzwa kwe charrería uye izvo, nekudaro, zvakabatana zvakanyanya nezvipfeko zveJalisco.
Mukupedzisa, isu takakuudza nezvazvo yakajairika koshitomu yaJalisco zvevarume nevakadzi. Asi isu takatsanangurirawo kwauri kukosha kwenyika ye charrería muMexico, iyo inosanganisira chipfeko ichi uye zvakare nemanzwi a mariachi. Zvese izvi zvakagadzirisa tsika yakayambuka miganhu yenyika yeAztec kuti ive inozivikanwa pasi rese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » America » Mekisiko » Chaiye Jalisco koshitomu
Kwamunoenda muna Chivabvu: gumi dzakanakisa nzvimbo